Nihemotra tamin'ny fanapahan-keviny ny governoran'i Vakinankaratra
2021-05-08 @ 05:17 in Ankapobeny
Vao tsy ela akory izay no namerina amin'ny laoniny ireo fandaharana politika rehetra ny mpitondra fanjakana. Notapahana manko fa haato ireo fandaharana malaza amin'izany. Nitroatra nanao fanambarana ireo firaisamonim-pirenena na ny teto an-toerana na ny iraisampirenena. Nanao fangatahana ny enina tamin'ireo haino vaky jery tratran'ny fampiatoana ny fandaharana tao aminy. Nilaza ny minisitry ny serasera, sady mpiahy ny Faritra Vakinankaratra fa afa-manao ny fandaharana indray ireo HVJ ireo rehefa manome antoka fa tsy hanakorontana ny filaminan'ny firenena. Dia nitohy indray ny fahamehana ara-pahasalamana eto amin'ny Firenena.
Mbola nisy ihany koa ireo mpanapa-kevitra no niverina tamin'ny zavatra notapahiny. Tantaraina an-tsary anareo ny toe-javatra nahatonga izany. Ampahatsiahivina fa vao nosokafana ny CTC na Centre de Traitement de Covid tao Antsirabe.
Etsy ankilany, nisy ny fanapahan-kevitra navoakan'ny Faritra tao Vakinankaratra
Nisy ny setriny avy amin'ny andian'olona.
Namoaka fanambarana indray ny Fiadidiana ny Faritra.
Mafy loatra ve ny fepetra ka nampitroatra ny olona? Misy fanehoana ve ao ambadika fa tsy ankasitrahan'ny vahoaka intsony ny mpitondra fanjakana? Samy fanontaniana avokoa ireo ao anatin'ireo toe-javatra nitranga ireo. Niniana ny tsy nametrahana ny hevitry ny olona.